Nwanyị nke Mba Nile - WRSP
NWAANYI NILE Niile
1945 (March 25): Ida Peerdeman dị afọ iri atọ na itoolu nwere ngosipụta nke otu nwanyị n'ụlọ ya na Amsterdam, ma mata ya dịka Virgin Mary. Nke a ga-abụ ọhụụ mbụ n'usoro n'usoro ụzọ atọ gara n'ihu ruo 1959.
1950 (November 1): Pope Pius nke Iri na Abụọ kwupụtara nkwenye siri ike nke Assumption nke Meri.
1950 (November 16): Ida ghọtara na ọ ga-akpọ Meri "Nwanyị nke Mba Nile." Nke a bụ mmalite nke usoro nke abụọ nke ngosipụta.
1951 (February 11): E kpughere ekpere ọhụrụ nke Ida site na Lady.
1951 (4 March): Ida hụrụ onyinyo ọhụrụ nke Nwanyị, nke ọ ga-ekesa.
1951 (Mee 31): Ida natara nkwenkwe ọhụrụ: Mary, Nwanyị ahụ, chọrọ ka popu kọwaa ya dị ka "Co-Redemptrix, Mediatrix and Advocate."
1954 (May 31): Mmalite nke usoro nke atọ nke ngosipụta.
1956 (May 7): Bishop Huibers nke Haarlem kwadoro mmachibido iwu nke ofufe ọha na eze na ngosipụta ahụ, wee maa ọkwa na nchọpụta diocesan banyere ngosipụta ahụ kwubiri na enweghị ike ikwenye na ha nwere ikike karịrị nke mmadụ.
1957 (March 13): Holylọ Nsọ dị na Vatican kwadoro ọkwa Bishọp.
1959 (May 31): Oge usoro nke ngosipụta nke Ida Peerdeman nwetara mechara.
1966 (February 19): E mere ogbako mbụ izizi na Paris na njigide Amsterdam.
1973 (29 Jenụwarị): Kọmitii nke dayọsis nke abụọ n'okpuru Bishop Zwartkruis eruteghị nkwubi okwu ọhụụ banyere ọnọdụ dị elu nke ngosipụta ahụ, mana ọ kwadoro na enwere ike ịhapụ ofufe ọha na eze.
1973 (June 12): Mmalite nke ihe ịtụnanya gụnyere ọbara ọgbụgba na ịkwa ákwá na ngosipụta na Akita, Japan, dabere na akpụrụ akpụ nke Lady of All Nations.
1974 (May): Ọgbakọ dị Nsọ maka Ozizi nke Okwukwe diocese dụrụ ọdụ diocese ka ọ nọrọ na ntaramahụhụ nke 1956, ma si otú a machibido ofufe ọha na eze.
1979 (Disemba): The Lady of All Peoples Foundation zụtara ala maka Ida na Diepenbrockstraat, Amsterdam, ebe dị ugbu a nke ụlọ ụka ahụ.
1984 (Eprel 22): Bishop Ito nke Niigata, Japan, ghọtara njirimara dị egwu nke ihe omume Akita.
1993: Vox Populi Mariae Mediatrici tọrọ ntọala iji kwalite ihe kpatara nkwenkwe ahụ.
1995: Otu ọgbakọ ndị nọn na-eto eto, ndị Ezinụlọ nke Mary Co-Redemptrix, tọrọ ntọala. Ha ghọrọ ndị nlekọta nke ụlọ ụka ahụ.
1996 (May 31): Bishop Bomers kwadoro nkwado nke ọha na eze. Enweghị nkwupụta banyere izi ezi nke mbido ahụ n'onwe ha.
1996 (June 17): Ida Peerdeman, bụ agadi 90, nwụrụ na Amsterdam.
1997 (May 31): Emume International Day nke Ekpere nke afọ a na-asọpụrụ Lady of All Nations bụ na Amsterdam.
2002 (May 31): Bishop Punt kwupụtara na a na-ahụta ọdịdị nke sitere na ikike sitere na mmụọ (constat de karịrị nke mmadụ).
2004 (June 30): Onye isi ala Gloria Arroyo, na nraranye ya, debere Philippines n'okpuru nchebe nke Lady of All Nations.
2005: Ọgbakọ maka Doctrine of the Faith, jụrụ ka e dochie okwu ndị dị na ekpere Amsterdam "onye bụbu Meri" ka "Meri Nwanyị A gọziri agọzi" dochie nghọtahie.
Ida Peerdeman (amụrụ na Alkmaar na August 13, 1905 dị ka Isje Johanna Peerdeman, nke ọdụdụ n'ime ụmụaka ise) bụ ihe dị ịrịba ama Nwanyị bụ onye malitere ngagharị nke mba ụwa maka nkwenkwe Mary dịka Co-Redemptrix, Mediatrix and Advocate. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ ezie na nghọta a ma ama nke ọhụụ bụ na onye ọhụụ bụ ụzọ na-enweghị isi maka nkwukọrịta nke mkpughe Chineke, ka ọ dị ugbu a, nkụzi Katọlik na-ekwenye na usoro ihe ọmụmụ banyere ọdịdị ọdịnala na ịkọwa ọdịnaya nke ọhụụ na ikike okike na nkọwa nkọwa nke onye ọhụụ. n'onwe ya, ọbụlagodi ebe a na-ahụta na ha sitere n'echiche Chukwu (maka nkà mmụta Katọlik n'okwu a, lee nchikota nke ọdịnihu Pope Benedict XVI na Bertone na Ratzinger, Ozi nke Fatima, 2000, na Karl Rahner, Ọhụụ na amụma, 1963). Ọ bụ ezie na utu aha Marian na nkwenye a chọrọ na akụkụ nke ekpere na ihe oyiyi na-aga n'ihu na ọdịnala karịa oge ndụ Ida, ọ nweghị onye ọzọ kwupụtara ha na ngwakọta a nke nwere mmetụta dị ukwuu. Ya mere enwere ike ikwu na Ida Peerdeman bụ ihe dị mkpa na-enye aka na mmepe nke narị afọ nke iri abụọ Katọlik ofufe Marian.
Ọ na-anọchi na ọdịnala European Katọlik zuru ebe nile nke nwanyị maara ihe / onye ọhụụ / ihe omimi, na-ata ahụhụ maka mmehie nke ọha mmadụ. Ndị inyom nke ụdị a (na-abụkarị ụmụ nwanyị meworo okenye na ọtụtụ oge [ma ọ bụghị mgbe niile] ndị na-alụghị di ma ọ bụ nwunye dịka Ida) na-ahụkarị ụfọdụ ambivalence site na ndị isi nwoke na ndị isi nchụ aja ụka, mana na mpaghara ha, ha na-eweta mmasị, nsọpụrụ na ntinye. Ha nwere ọhụụ na nrọ; ha na-ekwu na ha hụrụ mkpụrụ obi na pọgatrị; ha na-ebu amụma banyere ihe ndị mere eme. N’afọ ndị 1930, ọtụtụ ụmụ nwanyị German Katọlik na-ahụ ụzọ hụrụ ọdịda Hitler, wee nwee afọ ojuju nke ndị Gestapo na ime nke a. Offọdụ ndị ha na Ida dịkọrọ ndụ, dị ka Therese Neumann nke Konnersreuth, Bavaria (1898-1962), Léonie van den Dijck nke Onkerzele, Belgium (1875-1949), na Grete Ganseforth nke Heede, Lower Saxony (1926-1996) bụ ndị stigmatics. Ida egosighi ihe nlere anya nke ihe ojoo ma obu obara obara ma o kwuputara na ya ahuhu nke Obe. Ọ bụ nke ukwuu mwute; obere akụkọ ndụ nke Fr Sigl dere na websaịt Lady of All Nations Foundation na-egosi na Ida oge ụfọdụ kwenyere na ya nọ n'okpuru mwakpo ndị mmụọ ọjọọ. Ọhụụ nke afọ 1945 abụghị ahụmahụ mbụ na-enweghị ebube na ndụ ya; Ida kwuru na ya nwere meri Meri n'otu aka ahụ dị ka ọrụ ebube nke Fátima (Ọktọba 13, 1917), mgbe ọ dị nanị afọ iri na abụọ.
Ihe oyiyi Amsterdam nke egosiri Meri ka o guzoro n'ihu Obe, ya na uwe Kraist dika ihe okike ma soro ya mehie nmehie nke ihe a kpọrọ mmadu, na-egosipụta n'ụzọ ihe atụ nke ọrụ ụmụ nwanyị dị ka ndị na-arịa ọrịa na mgbapụta. Ọtụtụ ụmụ nwanyị nọ na Europe nke Katọlik na narị afọ nke iri na itoolu na nke iri abụọ hụrụ onwe ha n'ụzọ a, ọkachasị ndị mmụọ na ndị ọhụụ (akwụkwọ ndị gụrụ akwụkwọ na ihe a gụnyere Richard Burton, Nsọ Anya mmiri, Ọbara Dị Nsọ, 2004). Meri dịka onye ya na Kraịst na-ata ahụhụ dabara adaba na-anọchi anya ụmụ nwanyị ndị a na-enwe ihe mgbu nke Passion na ọkwa mmụọ na "obi" ha.
Ihe mbụ Ida pụtara nke mbụ n'usoro a bụ n'ụlọ ya na Amsterdam na Machị 25, 1945, ya na ụmụnne ya nwanyị atọ na onye ndu ime mmụọ ya, onye Dominican aha ya bụ Fr Frehe, bịara. Datebọchị a dị nso na narị afọ isii nke “Eucharistic Miracle of Amsterdam” (Machị 13, 1345), ndị Katọlik na-asọpụrụ n’obodo ahụ. Ida chere na onye nọ ya n’ọhụụ bụ Meri Nwa Agbọghọ ahụ wee jụọ ya ma nke a ọ bụ eziokwu. Nwanyị ahụ gosipụtara nke a wee zaa, "Ha ga-akpọ m 'Nwanyị ahụ', 'Nne'" (ekwughachiri ihe ngosi na ozi ahụ n'ụzọ zuru ezu na Ozi nke Lady nke All Nations, nke Lady nke All Nations Foundation, Amsterdam bipụtara. ). Nwanyị ahụ nyere amụma nke mbụ nke ọtụtụ ndị na-akwado ya na-ekwu na ha emezuwo: mkpughe nke ụbọchị mgbapụta nke Netherlands (May 5, 1945).
Ubochi nke March 25, 1945 rue August 15, 1950 bu uzo nke mbu, iri abuo na ato. Ozi ọhụụ nke Ida n’oge a gụnyere isiokwu dịka mkpa Cross na mmadụ ịjụ ya; enweghị ịhụnanya, eziokwu na ezi omume n ’ụwa; ọdachi ndị ga-eme n'ọdịnihu; agbamume na Vatican na-eduga ụwa n'oge ọchịchịrị; mkpa ọ dị toka ka ọ dị ugbu a ma zụọ ndị ụkọchukwu maka ọrụ a; na-akpọ ụfọdụ mba (ọkachasị England, andtali na Germany) ịkpọsa eziokwu Ndị Kraịst; nchegbu banyere komunizim na Soviet Union (ịgbaso ọdịnala nke ozi nke Fátima na Portugal).
Akụkụ nke abụọ nke ngosipụta, iri abụọ na isii kpamkpam, mere n'etiti November 16, 1950 na Eprel 4, 1954. Na November 16, 1950, ekpughere aha nwanyị ahụ na Ida dị ka "Nwanyị nke Mba Nile" (De Vrouwe van alle Volkeren). Nke a sochiri nchegbu na ozi ndị gara aga maka mba ụwa. N'ime 1951, echiche ndị ọzọ dị mkpa banyere ụdị ọdịdị ahụ malitere, mbipụta ya nke Ida kwuru na nwanyị chọrọ. Nke mbu, enwere ekpere, n'okwu ndi a: Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Ọkpara nke Nna, zipu Mọ-Gi n'elu uwa; Ka Mmụọ Nsọ biri n’ime obi nke mba niile, ka echekwara ha pụọ ​​na mmebi, mbibi na agha. Ka Nwanyị nke Mba Nile, onye bụbu Meri, bụrụ onye nkwado anyị; Amen. ” Echiche nke Mụọ Nsọ imeghari mba nile nke ụwa na iweta udo dị mkpa nye Ida na ozi ya dịka ọnụnọ nke Nwanyị ahụ.
Nke abuo, a ga-enwe onyinyo ohuru nke Meri, Nwanyị. N'ime ya, ọ na-eguzo n'ihu Cross n'elu ụwa nke ụwa ụzarị na-esite n'aka ya. [Foto dị n'aka nri] Nke a na-adabere na ebumnuche Marian ọdịnala, ọkachasị ndị metụtara Immaculate Design. Sheepwa na atụrụ ọcha na gburugburu ya gbara gburugburu ụwa, na-egosipụta ndị mmadụ nke ụwa. N’oge na-adịghị anya, emere onyinyo ahụ na ihe osise enyere site n’aka German Heinrich Repke; nke a ka kwụgidere na Amsterdam na emeela ọtụtụ akwụkwọ, gụnyere obere mbipụta na kaadị ndị bu ekpere ahụ.
Nke ato, Ida kwupụtara nkwenkwe Marian ọhụrụ nke Nwanyị ahụ jụrụ Chọọchị ka ọ kọwaa. Nke a ga - abụ nke Marian nke ise na nke ikpeazụ (na - esote nke anọ: Nne nke Chukwu /Theotokos; Mgbe Nwaanyị; Ntughari uche; Nwere), mana Nwanyị ahụ buru ụzọ hụ na a ga-ese okwu na Chọọchị. Ọ ga-akọwa Meri dịka Co-Redemptrix, Mediatrix, na Advocate. Nke a metụtara Meri na Ọkpara ya na Cross na-ata ahụhụ.
N'agbata Mee 31, 1954 na May 31, 1959, usoro nke atọ nke ngosipụta ahụ gbanwere n'ụdị na ngosipụta kwa afọ na May 31, nke ghọrọ ụbọchị metụtara The Lady of All Nations (emesịa n'afọ ahụ ụbọchị a ka akara ụbọchị dị ka oriri nke Queenship of Mary nke Pius nke Iri na Abụọ, mana kemgbe 1969, ekenyela ya oriri nke Ọbịbịa nke Meri gara Elizabet). E nwere nanị ngosipụta asaa na nke a; na mgbakwunye na ndị nke dị na Mee 31 kwa afọ, e nwere ụbọchị ọzọ na Wednesde Wenezdee, Febrụwarị 19, 1959, na-ebu amụma ọnwụ Pope Poopu XII (ọ nwụrụ n'ọnwa Ọktọba). Na mpaghara nke atọ a, e mesiri ike banyere Oriri Nsọ, na-egosipụta ahụmịhe dị ike nke Ida n'oge Mass. Mee 31, 1959 hụrụ njedebe nke oge izizi nke ngosi ahụ. Ka o sina dị, ruo na 1980s, Ida na-edekọ ahụmahụ na ozi oge ụfọdụ site n'oge ruo n'oge.
Site na mmasi ọha na eze, Bishọp nke Haarlem, Johannes Huibers, bidoro ọrụ diocesan na 1950s ma gbochie ofufe ọha na eze. Na 1956, o kpughere nchoputa nke nchoputa a dika non constat de supernaturalite, ya bu na ihe akaebe ekwesighi nkowa di omimi maka nkpughe. Holylọ ọrụ dị nsọ nke Vatican kwadoro nkwado ha maka mkpebi a na 1957. Kọmịsọna nke abụọ n'afọ ndị 1970 bịara n'otu nkwubi okwu ahụ, ọzọ na nkwado nke Ọgbakọ Dị Nsọ maka Ozizi Okwukwe (nke nọchiri Holy Office na 1965) . Otú ọ dị, mkpebi a meghere ohere nke nnwapụta n'ọdịnihu.
Agbanyeghị na diocese na-achọghị ịkwado ma ọ bụ kwado ọbịbịa Ida, ọ na-enwekarị ndị na-eso ụzọ. Mgbe Peter Jan Margry (na nchịkọta ederede Mary kpaliri ya, 2009) na-akọwa etu ntinye ofufe siri ike na 1950s ma dabere na obere otu iji lanarị, ọ na-egosipụtakwa otu netwọkụ mba ụwa nke Lady of All Nations si gbanye mkpọrọgwụ, na-amalite site na otu onye otu ọgaranya Dutch Brenninckmeijer ezinụlọ na-enyere aka ịkwụ ụgwọ ije na inye ogige. Na Febụwarị 19, 1966, onye edemede Marian Raoul Auclair guzobere ọgbakọ na Paris na ngosipụta Amsterdam, nke gbara ume ikwuwapụta ekpere ahụ Ida kpughere na 1951. Nke a butere nkwado nke ọtụtụ ndị bishọp maka ekpere ahụ, na-enye ha imprimatur, ya bu ikike ka eji ekpe ekpere na diocese ndi Katolik. Nraranye nye Nwanyị nke Mba Nile gbasara na mba ụwa. Na Akita, Japan, otu onye nọn, Nwanna nwanyị Agnes Sasagawa, bidoro ịkọ akụkọ banyere lekwasịrị anya n'oche osisi Lady nke All Nations. E kwuru na ihe onyonyo a gbara ọbara site na July 6, 1973 ruo Septemba 29, wee kwaa ákwá afọ isii site na 1975 ruo 1981. Nwanne nwanyị Agnes natara ozi, na ahụmịhe ya bụ nke bishọp obodo ahụ gosipụtara na 1984. Nke a bụ ihe ngosi nke nkwado siri ike maka ngagharị nke Lady of All Nations na East Asia, ebe ofufe siri ike karị na Philippines, mba nwere ebe nsọ kachasị njọ. Oke nke mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ nke ngagharị nke Nwanyị nke All Nations gosipụtara site n'eziokwu na, na June 30, 2004 Gloria Arroyo, na nraranye ya dị ka onyeisi oche, debere Philippines n'okpuru nchebe nke Lady of All Nations.
Na Disemba 1979, The Lady of All Nations Foundation zụtara ala na Diepenbrockstraat, Amsterdam; ebe ahụ ka Ida nọ ma wuo otu ụlọ ụka nke ghọrọ ebe etiti nzuzo nke òtù nzuzo. Na 1990s hụrụ ọganihu ọhụrụ na mmegharị ahụ. Na Vox Populi Mariae Mediatrici, nke zuru ụwa ọnụ nke akwadoro maka nkwalite nkwenkwe, bụ nke e hiwere na 1993. Onye nkwuchite ya a ma ama bụ Deacon Prọfesọ Mark Miravalle nke Mahadum Franciscan dị na Steubenville, Ohio, onye edemede mara mma na Mariology na isiokwu ndị ọzọ nke Ndị Kraịst. Na Vox Populi arịọla ndị Vatican ọtụtụ nde mbinye aka, nke gụnyere nke ọtụtụ ndị kadinal na ndị bishọp. Mgbe ahụ ọgbakọ nke ndị nọn na-eto eto si Austria hiwere na 1995 nwere aha Ezinụlọ nke Mary Co-Redemptrix, n'okpuru nduzi nke onye nkwado Fr Paul Maria Sigl. Ha dabere na ụlọ Ida Peerdeman na Diepenbrockstraat dị ka ndị nlekọta nke ụlọ nsọ ahụ. Na May 31, 1997, ụbọchị mbụ nke International Day Day nke Ekpere maka nsọpụrụ nke Lady of All Nations emere na Amsterdam (ma mesịa, na ebe ndị ọzọ na n'afọ niile). Ndị a bụ nnọkọ buru ibu nke na-adọta ọtụtụ puku ndị bịara.
Na May 31, 1996, ka Ida na-anwụ, Bishọp Hendrik Bomers nabatara ofufe ọha na eze, bụrụ onye bishọp suragan Jozef Punt gbara ume (o doro anya na agbanyeghị na nnọkọ nke ndị Bishọp Dutch). Mkpebi ahụ pụtara na òtù nzuzo nke Lady of All Nations bụ ọkwa gọọmentị ugbu a. Afọ isii ka nke ahụ gasịrị, na May 31, 2002, Bishọp Punt, na ike nke nyocha nke onwe nke akwụkwọ izizi mbụ ahụ na ịjụta kọmịshọn ọhụụ, kwupụtara na ngosipụta ndị a bụ nke sitere na ikike karịrị nke mmadụ (constat de supernaturalite). Agbanyeghị, ọ kwughachiri ihe ngosi nke Chọọchị na ngosipụta, ya bụ na (1) ikike iche echiche nke onye ọhụụ na-ekere oke na ihe ahụ, nke mere na enweghị ike ikwenye n'ụzọ pụrụ iche nke ozi ngosi na onyonyo na nkọwa niile, na (2) ndị Katọlik a naghị amanye ha ikwenye na ngosipụta ọbụlagodi mgbe Nzukọ Nsọ kwadoro ha.
Ida ewebatala echiche ndi a ma ama na omenaala ndi Katoliki ndi Katolik n’oge mgbe ndi obodo ndi Katoliki na anabata ha. Nke a na-agụnye ndị chọrọ ịmaliteghachi mmụọ Marian n'ihi na ọ dịka ọ jụla kemgbe Second Vatican Council (Vatican II). Nkọwapụtawo emewo ka mkpa Meri dị n'oge ọ dị ka a ga-edebe ihe ọmụmụ banyere Mariology n'ime nnukwu mmesi ike na Christocentricity na nkuzi na usoro ụka. Mmetụta nke mgbanwe mgbanwe a enweela mmetụta karịa na mpaghara karịa ọkwa ụwa: popu adịghị agbanwe agbanwe n'ịkwalite nraranye nye Meri dịka Nne nke Chukwu, mana ofufe ụka parish dị ka usoro, rosary, na ịga obere Arianlọ ekpere Marian ajụla, na Europe na North America, opekata mpe.
Akwụkwọ Marian nke ise a chọrọ gụnyere ihe atọ: Co-Redemptrix, Mediatrix, na Advocate.
Co-Redemptrix. Edward Schillebeeck kwuputara usoro ihe omimi nke ozizi a Mary, Nne nke Mgbapụta (1964). A na-enweta ihe mgbapụta n'ụzọ zuru oke site na nnụnụ Kraịst na ọnwụ n'obe. Onye kwere ekwe na-arụkọ ọrụ n'ime ya ma ọ bụ mgbapụta ya na ọkwa nke ya site n'okwukwe ya ma na-ekere òkè na ndụ sacrament nke Chọọchị. Ebe Meri bụkwa onye kwere ekwe, na-anata site na amara dịka ndị ọzọ mkpụrụ nke mgbapụta, ọ dị iche na ndị ọzọ kwere ekwe na na nkwado ya dị mkpa maka nbanye: ọ bụ nne nke Chukwu mụrụ Kraịst, ebe ọ kwadoro nke a na nkwupụta. Ya mere, ọ bụ onye so na ya ọ bụghị naanị dabere na mgbapụta nke ya, kamakwa ọ bụ n’ezie na mgbapụta nke onye ọ bụla ọzọ.
Na 1993, Mark Miravalle dere Mary: Co-Redemptrix, Mediatrix, Onye Nkwado na-akwalite nkọwapụta nke mbido bidoro n'ọhụụ Ida. N'ebe ahụ Miravalle nakweere na ahaghị "Co-Redemptrix" adịghị n'ụdị ahụ doro anya ruo narị afọ nke iri na anọ. Otú ọ dị, ọ na-ekwusi ike na ọtụtụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị bu ụzọ, gụnyere Agba Ọhụrụ na ihe odide nke narị afọ nke abụọ ndị nkwado okwukwe Justin Martyr na Irenaeus, gosipụtara nkwenye na aha a site na nkọwa ha banyere omume Meri na mkpa ha. Dị ka ihe atụ, Meri bụ onye na-aza “ka ọ dịrị dị ka i kwuru” n’ozi onyeisi ndị mmụọ ozi ji akpọsa ọmụmụ Kraịst, Meri bụkwa “Iv ọhụrụ” ahụ, ya na Kraịst dị ka Adam ọhụrụ ahụ, na-atọghe eriri nke mmehie nke Adam na Iv ji kee mmadu. Meri na Kraist na-ata ahuhu n'obe: Hilda Graef's compendium, Mary: Akụkọ banyere ozizi na nkwenkwe (mbipụta ohuru ebipụtara na 2009), na-egosi echiche doro anya nke Meri dịka onye na-ata ahụhụ na Kraịst na nnọchite mmadụ laghachi na ndị ọkà mmụta okpukpe Byzantine dịka John the Geometer (d. c 990).
Mgbasaozi. Enwere ike ịghọta okwu a na ọkwa abụọ. Nke mbu, n'ogo n'ozuzu, enwere ike izo aka Onye Kraist obula dika onye ogbugbo ma obu onye ogbugbo ma oburu na ha dika ndi oru na obia nke okwukwe nke ndi ozo, dika imaatu site n'ekpere ha, gosi ha eziokwu nke ozioma site na ntuzi aka n'ụzọ ndị dị irè bụ́ ndị na-enye ihe atụ Ndị Kraịst. Karl Rahner, na nke ya Meri, Nne nke Onye-nwe-anyị (1974) na-egosi na, ebe Meri bụụrụ nnukwu ihe atụ nke okwukwe Ndị Kraịst, onye izizi kwenyere, ihe a ga-ekwu maka ya nwere ike ikwu na ọ bụ ndị otu ụka niile. N’echiche a, Meri bụ onye mgbasa ozi dịka ndị otu Kristi niile, yabụ, onye ọrụ n’ime mgbapụta nke ndị ọzọ, mana ọbụghị isi mmalite mgbapụta ahụ.
Kaosinadị, nke abụọ na otu pụrụ iche, a kpọọla Mediatrix of All Graces. Nkwupụta Amsterdam na-ezo aka n'echiche a nke "mediatrix" kama izugbe. Utu aha a na - etinye ya na ndị ọzọ kwere ekwe dị iche na nke metụtara echiche nke Meri dịka naanị onye na - abụghị Kraịst ga - esonye na mgbapụta ebumnuche. Amara niile sitere n’aka Chineke (Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ) na-abịakwute onye kwere ekwe site n’aka ya. Graef chọpụtara nkuzi a azụ na narị afọ nke asaa (Sophronius, Onyeisi nke Jerusalem), mana Bernard nke Clairvaux (1090-1153) kwuru ya nke ọma. O huru Meri dika olu nke aru Kraist, onye sitere n’aka ya amara bia site na Kraist dika Isi rue aru nke ozo. N'okwu ya, ọ bụ "Mediatrix with the Mediator."
Mgbe nkọwa nke ozizi nke Immaculate Conception by Pius IX na 1854, a na-ewere nkuzi Marian ndị ọzọ dị ka ndị ga-ekwe omume maka nkọwa ndị ọzọ, gụnyere Assumption, mechara kọwaa na 1950 site Pius XII. Mgbasa ịkọwa Meri dị ka "Mediatrix of All Graces" malitere na 1896, na-agba ume site na ntụnye aka nke mgbasa ozi nke Mary na ihe odide nke Leo XIII. A kọọrọ akụkọ ihe mere eme ya na Gloria Falcão Dodd Virgin Mary, Mediatrix of All Grace (2012) . Onye Jesuit nke Belgium, René-Marie de la Bloise, tụpụtara echiche a na ndị bishọp Belgium, nke Cardinal Mercier na-edu, butere ngagharị ahụ ka ọ na-eto na mbido narị afọ nke iri abụọ. Thetù ahụ mebiri mgbe Agha Firstwa Mbụ gasịrị, mana ọ ga-abụ ihe ziri ezi ịkọwa na arịrịọ Ida maka nkwenkwe Marian ọhụrụ bụ onye na-anọchi usoro mbụ ahụ na ntọala ya na mba agbata obi.
Nkwado. Akwụkwọ Stephen Shoemaker, Mary na okwukwe nke ndi Kristain mbu, na-egosi na narị afọ nke anọ ka e guzobere okwukwe Meri dị ka onye na-arịọchitere mmadụ arịrịọ. N'oge ochie Europe, ike Mary nwere ịrịọchitere arịrịọ maka ndị mmadụ, oge ụfọdụ megide usoro ziri ezi nke ikpe ziri ezi nke Chineke megide ndị mmehie, bụ nke a na-eme na akụkọ akụkọ ewu ewu na ọtụtụ mgbidi na ụka. Echiche nke ịrịọchitere Meri bụ etiti nke ekpere Marian a kacha mara amara ka dị mkpa na ntinye ofufe taa, Ave Mary na Salve Regina. Echiche bụ na Meri bụ onye na-akwado ụmụ mmadụ n’ihu Chineke bụ mgbe ochie, nke a na-agbagha agbagha na ọdịnala Katọlik.
Iwu Vatican nke Abụọ na Chọọchị, Lumen Gentium (isi nke asatọ na Mary), na-ezo aka na Meri dị ka "Mediatrix" na "Advocate" ma ọ bụghị "Co-Redemptrix." Ọ dịkwa nlezianya itinye aha abụọ mbụ na gburugburu nke okwu Akwụkwọ Nsọ na Kraịst bụ otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ. Okwu a bụ "Co-Redemptrix," ọ bụ ezie na o nwere akụkọ ogologo na ọdịnala Katọlik, enwere ike ịtụle ka ndị ọzọ ga-emebi ụkpụrụ a. Kemgbe Vatican nke Abụọ, Chọọchị Katọlik na-enwe nchegbu ibulite njikọ nke ụka, nke mbụ ya na Ọtọdọks, mesịa nwee ụka ndị ọzọ dị ka ndị Lutheran na Anglịkan, mgbe ahụ ụka ụka Ndị Kraịst niile, na n’ikpeazụ n’okpukpe ndị ọzọ. Nkọwa ọ bụla doro anya nke pụtara itolite Meri ga-abụ ihe amamihe na-adịghị na ya. O nweghi pope kemgbe Pius nke Iri na Abụọ, ọbụnadị na ọtụtụ Marian nke ndị popu, John Paul II, ekwenyela ka ọ gbakwunye na ndepụta nke nkwenkwe Marian. Ngagharị maka nkọwapụta nkenke nke Mary dị ka Co-Redemptrix, Mediatrix na Advocate na-egwu mmiri megide ebili mmiri ahụ, mana ọ bụ nnukwu njem gụnyere nnukwu ndị ụkọchukwu kwupụtara echiche ya n'ụzọ doro anya na usoro mmụta okpukpe na akụkọ ihe mere eme, ọkachasị site na nzukọ Vox Populi Mariae Mediatrici. Yabụ, ọ bụrụ na nkọwapụta nkwenkwe ọzọ nke Mariology ga-ekwe omume, ọ ga-abụ nke a.
Okwesiri ighota na Ida Peerdeman abughi onye mmegide nke Vatican II. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ na-ekwu na ya ahụla ya na ụfọdụ ozi mbụ ya na-akpọ maka mgbanwe nke Chọọchị iji mee ka ọ dị mma maka ọrụ nke iduga mba dị iche iche na Cross n'oge nsogbu dị egwu maka ụwa. Ka oge na-aga, ụjọ nọ na-atụ ya na ọ ga-eme ka o nwee nsogbu n ’etiti nke Oriri Nsọ, alụghị ndị ụkọchukwu, na ụfọdụ isi ihe nkuzi Chọọchị bụ. Ka o sina dị, ọ leghị Kansụl anya agbanweela nkwenkwe Katọlik dị mkpa, usoro ya abụghịkwa mgbochi nkwenye. Nwanyị Lady of All Nations Foundation na-ahụ ya dị ka onye nkwalite ụkpụrụ nke Vatican II, na-atụ anya ha na ozi ya.
Dị ka ọtụtụ ndị ọhụụ nke Marian nke narị afọ nke iri abụọ, Ida hụrụ ọdachi maka agbụrụ mmadụ; o kwuru banyere “mbibi, ọdachi na agha.” Kaosinadị, dịka ọ dị na ọnọdụ ndị ọzọ, nke a bụ nke sitere na ntụkwasị obi na oge udo n'ọdịnihu, ọchịchị nke Kraịst, nke ọ dị mkpa ka a mee ngwa ngwa site n'ekpere, ntinye na ndụ ezi omume. N'ihi ya, a na-akpọ Meri na nwunye ya “Nwanyị nke Mba Nile” ọ ga-abụ onye ga-eduga mba niile n’udo. Ntuziaka maka mba dị iche iche na omume papal na nnọchite ha na-ekwughachi ọhụụ nke Lúcia dos Santos nke Fátima, bụ onye hụrụ nraranye nye obi ọcha nke Meri na ntinye nke papal nke Russia nye ya dịka ụzọ nke oge udo ga-abịa n'ọdịnihu . N’oge na-adịghị anya na ọdịdị ala, Mariette Beco nke Banneux na Belgium bụ onye ọhụụ Meri duru gaa n’isi mmiri “echebere maka mba niile - ịgwọ ndị ọrịa.”
Ndị otu na-akwado ngosipụta Amsterdam na oku maka nkwenkwe ọhụrụ na-esonye na ndụ Churchka Roman Katọlik. Onweghi ememe ọ bụla metụtara otu a. Enwere ubochi ekpere, mgbe ufodu n'uwa. Ida Peerdeman kachasị echegbu onwe ya, ọkachasị na usoro nke atọ nke ọpụpụ, bụ Oriri Nsọ.
Ida biri na Amsterdam, na diọcese nke Haarlem; n’afọ 2008, akpọrọ diocese a aha ya bụ Haarlem-Amsterdam. Ya mere, ndị bishọp nọchiri anya Haarlem bụ ọrụ maka nghọta nke ngosipụta na, dị ka usoro iheomume dị n'elu na-egosi, nke a sitere na enweghị ntụkwasị obi na nkwado na nnabata obi (ọ bụ ezie na ndị na-efe ofufe na-ekwu na ọbụnadị ndị bishọp tupu Huibers bịara ịkwanyere Ida na nkwupụta ya ùgwù n'agbanyeghị nkwenye ha na ime ka ọha na eze pụta). Bishọp nke diocese ahụ nwere ọrụ na ikike ime mkpebi gbasara ngosipụta na-adụ na ndụmọdụ nke kọmịshọn nke ndị ọkà mmụta okpukpe na akparamaagwa nke ọ họpụtara. Ọ bụ ezie na a dụrụ ya ọdụ ka ọ gaa ogbako ọgbakọ ndị bishọp na ọgbakọ maka ọgbakọ nke okwukwe na Vatican, ma na-emekarị ya, ha onwe ha kwesịrị ịkwanyere mkpebi ya ùgwù (otu ikpe ebe sistemu a dara bụ na Medjugorje, Bosnia -Hercgovina, ebe, n'ihi mmegide bishọp megide oke ibu nke nkwado, e nyefere ikike nke mkpebi na bishọp mba wee wepu ya na Vatican).
Bishop Punt, bishọp mechara gosipụta ndapụta nke Ida Peerdeman, nwere ọrụ dị mkpa na ngagharị ahụ dịka onye isi diocese ahụ ọ malitere na nke isi ụlọ arụsị ya dị. [Foto dị n'aka nri] Dika o kwenyere na ngosipụta ndị a na diọcese ya bụ ezigbo ikike karịrị nke mmadụ, mgbe ahụ ọ nwere ọrụ ịkwado, ịgba ume ma duzie usoro ahụ na-eso ha.
The Vox Populi Mariae Mediatrici na-arụ ụka maka nkọwa nke "nkwenkwe nke ise" bụ nke mba ụwa niile na onye isi ya bụ Mark Miravalle nke Mahadum Franciscan, Steubenville, Ohio. Ọfịs ya dị na Santa Barbara, California. O nwere webusaiti na otutu akwukwo, ma na akwukwo na ihe a na -ebu na onyo.
Enweghi ike ihu mmeghari Ida site na ndi ozo ndi Marian nke oge a. Nye ọtụtụ ndị na-efe ofufe, ndị a bụ otu mpempe akwụkwọ, na-emesi ndị kwere ekwe obi ike site n'ọtụtụ ihe atụ na Meri abịakwutewo ha n'oge nsogbu; n'agbanyeghị amụma ịdọ aka ná ntị, ekpere na ikwesị ntụkwasị obi ga-akwụghachi ụgwọ. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị nwere mmasị nwere ike ịtọlite ​​esemokwu n'etiti okwu ngosi; ọtụtụ weebụsaịtị ga-ebuli otu ma ọ bụ karịa mgbe ha na-ekwulu ndị ọzọ. Ejiri otu pụtara na ndị ọzọ iji nwee obi abụọ banyere ya. Dịka ikpe ndị ọzọ ama ama, dịka ọmụmaatụ, San Sebastián de Garabandal na Spain (1961-1965); San Damiano, Italy (1964-1981); Medjugorje na Bosnia-Hercegovina, Bosnia-Hercegovina (1981-ugbu a), mmemme Amsterdam nwere ikike ịkpata esemokwu na nkewa.
N'adịghị ka ihe atụ ndị ọzọ na-ese okwu, Amsterdam enwetala nkwado nke diocese mpaghara ahụ. Ya mere, otu ihe ịma aka nye ọhụụ Amsterdam bụ ịsị na bishọp obodo ahụ, bụ Jozef Punt, bụ maverick nakwa na ndị bishọp Dutch ndị ọzọ na Vatican anaghị anabata ya. Dịka ọmụmaatụ, a na-azọrọ na Bishọp Hnilica (onye nwụrụ na 2006) nwere mmetụta Punt nwere, onye Slovak na-akwado ngosipụta nwere ọrụ na ọnọdụ a na-enyo enyo na Chọọchị Katọlik. Ndị na-emegide ya na-arụtụkwa aka na Vatican n'onwe ya agbanweela okwu nke ekpere mbụ ahụ, na-enweghị mmasị n'okwu a "onye bụbu Meri" wee jiri "Meri Nwanyị Dị Ngọzi" dochie ha. Ha na-ekwu n’ezie na ọ bụrụ na okwu ndị ahụ ekwesighi, ha agaghị ekwu na ọ bụ Meri n’onwe ya? Ihe ọzọ na-ajụ bụ ịjụ ihe kpatara ya, ọ bụrụ na ngosipụta a bụ eziokwu, ndị popu azabeghị oku a na-akpọ maka nkwenkwe ọhụrụ ahụ.
Ma, n'ezie, ndị na-efe ofufe na ndị na-emegide ọdịdị ahụ na-aghọtahiekarị ihe nlere ụka nke Chọọchị maka ọhụụ ọhụụ nke bụ "mkpughe nke onwe" ọbụlagodi ebe ha nwere mmetụta ọhaneze. Ọbụna ebe a nabatara ha dị ka ndị sitere na Chineke, ọdịnaya nke ozi na mkpughe na-abụkarị ndị ruru eru site na eziokwu a nabatara ha site na ikike nke onye ọhụụ, ya mere, ọ bụ mmụọ nke ihe ahụ karịa nkọwa zuru oke. ịbụ ndị a kwadoro, yana ókè ozi ndị ahụ na-ezo aka na onye na-efe ofufe na mmalite nke Akwụkwọ Nsọ na eziokwu bụ isi nke nkuzi Ndị Kraịst. N'adịghị ka nke abụọ, ozi pụtara mmadụ anaghị abụ ihe na-adịgide adịgide; mgbe ha nwere ike ịbụ, na nghọta Katọlik, nkwupụta nke onye ọhụụ nke nnukwu ihe omimi na ikike karịrị mmadụ, nghọta na ncheta nke nzute a na-ahụta na isiokwu nke onye ọhụụ na-emetụta ya.
Ntughari nke ntinye uche nye Lady nke All Nations tara ahụhụ site na mkpakọrịta na "Community of the Lady of All Nations" ma ọ bụ "Ndị agha nke Mary, ”nke Marie-Paule Giguère duziri na Quebec, bụ́ onye zọọrọ na ya bụ anụ ahụ́ nke Meri Nwa Agbọghọ ahụ. Nwanyị Lady of All Nations Foundation na Bishọp Punt ji nkwusi ike gọnahụ nkwado ọ bụla maka otu a. E nwekwara ebe nrụọrụ weebụ na-eduhie eduhie dị ka www.ladyofallnations.org, nke ndị mmadụ na-enyocha mgbe niile na-enyocha mmegharị ahụ, mana ọ bụghị ọnụ na-ekwupụta ya. Weebụsaịtị a metụtara ozi Ida n'oge gara aga na agha ga-eme n'ọdịnihu n'etiti Iso Christianityzọ Kraịst na Islam, na-ewepụta nhụjuanya nke Islamophobic nke mmalite narị afọ nke iri abụọ na otu na ọhụụ Ida n'etiti iri abụọ na abụọ.
Iji mechie, ngosipụta nke Amsterdam ewerewo ọnọdụ ha na ndị ọzọ nke ndị bishọp diocesan gosipụtara na narị afọ nke iri na itoolu na nke iri abụọ, dị ka Lourdes na Fátima (ndị a bụ ndị a ma ama, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ gafee ụwa). Ozi ndị Ida Peerdeman nke Amsterdam na-ekwu na Virgin Mary nwere ikike nha anya nke ndị ọhụụ na Lourdes ma ọ bụ Fátima ka ndị Katọlik jiri nlezianya tụlee tupu ha anabata ma ọ bụ leghara ya anya. Movementtù ahụ na-akwado nkọwa papal nke nkwenkwe Mary dị ka Co-Redemptrix, Mediatrix na Advocate bụ otu n'ime mkpọsa ọhụụ kachasị na ụwa Katọlik taa, na-agbagha na ịkpọ oku maka nyocha nke ọhụụ nke Medjugorje (ọtụtụ ndị Katọlik bụ ndị abụọ) . Ihe si na arịrịọ a zigara popu na-adabere na ọdịnihu nke Katọlik Katọlik. Chọọchị ahụ ọ ga-ekwenye na mmepe nke ọdịnala Marian kemgbe ọtụtụ narị afọ site na nkwupụta na nkọwapụta, na-akọwapụta ma na-ewusi oke oke nke ozizi ya, ma ọ bụ nkwenkwe ga-aga n'ihu, enwere kemgbe Vatican II, na nchegbu ndị ụkọchukwu na nke ndị ụka gafere na nke a na afọ nkwupụta siri ike na ihu nke uwa nke uwa agabigala?
Image # 1: Foto nke ọhụụ ọhụụ Ida Peerdeman.
Foto # 2: Foto nke ihe osise na-egosi Nwanyị Nwanyị nke Mba niile.
Foto # 3: Foto nke ụlọ arụsị nke Lady anyị nke All Nations na Haarlem-Amsterdam.
Bertone, Tarcisio na Ratzinger, Joseph. 2000. Ozi nke Fatima. Vatican City: Ọgbakọ maka Ozizi Okwukwe. Nweta site na http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html na 10 August 2016.
Burton, Richard E. 2004. Nsọ mmiri, Ọbara dị Nsọ: Womenmụ nwanyị, Katọlik, na Omenala nke Ahụhụ na France, 1840–1970. Ithaca na London: Mahadum Cornell University.
Dodd, Gloria Falcao. 2012. Virgin Mary, Mediatrix of All Grace. Bedford, MA: Academylọ akwụkwọ nke Immaculate.
Graef, Hilda na Thompson, Thomas A. 2009. Mary: A History of Doctrine and Dev nsọ, mbipụta ọhụrụ. Notre Dame, IN: Ave Maria.
Laurentin, René na Sbalchiero, Patrick, ụmụ nwoke. 2007. Dictionnaire des 'Apparitions' de la Vierge Marie: Inventaire des Origines à nos Jours, Methodologie, Bilan Interdisciplinaire, Gaje. Paris: Ogige.
Margry, Peter J. 2009. "Paradoxes nke Marian Apparitional Contestation: Networks, Ideology, Gender, na Nwanyị nke Mba Nile." Pp. 183-99 n'ime Meri kpaliri: Ike nke njem njem na Ụwa nke Oge, nke Anna-Karina Hermkens dere, Willy Jansen, annd Catrien Notermans. Farnham: Ashgate.
Maunder, Chris. 2016. Nne anyi di iche iche nke mba di iche iche: ihe omuma nke Meri na 20th Century Catholic Europe. Oxford na New York: Mahadum Oxford University.
Miravalle, Mark, ed. 1995. Mary Coredemptrix Mediatrix Advocate, Ntọala Okpukpe: Na-akọwa nkọwa Papal? Santa Barbara: Akwụkwọ nke Queenship.
Miravalle, Mak. 1993. Mary: Coredemptrix, Mediatrix, Onye Nkwado. Santa Barbara: Akwụkwọ nke Queenship.
Onyekwere Karl. 1963. Ọhụụ na amụma (Ajụjụ Disputatae 8–10). New York: Onye na-azụ anụ na Herder.
Schillebeeckx, Edward. 1964. Mary, Nne nke Mgbapụta. London: Sheed na Ward.
Onye na-akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ, Stephen J. 2016. Mary na okwukwe nke ndi Kristain mbu. New Haven na London: Mahadum Yale University.
Nwanyị Nwanyị nke Mba Nile / Ezinụlọ nke Meri na Nwanyị nke All Nations Foundation nwere ọtụtụ ihe jikọrọ: Nweta site na http://www.de-vrouwe.info na http://www.devrouwevanallevolkeren.nl karị (tinye / en maka asụsụ bekee), ha abụọ nwetara na 10 August 2016.
Nwanyị nke All Nations Foundation. 1999. Ozi nke Nwanyị nke Mba Nile. Amsterdam.
Weebụsaịtị Vox Populi Mariae Mediatrici. Nweta site na http://www.fifthmariandogma.com na 10 August 2016.